Indlu epholileyo enokufikelela egadini-iibhedi ezi-4
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLise
Le ndlu yi-55 m2 kwaye ineholo yokungena, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye nendlu yangasese encinci eneshawa. Kukho umatshini wokuhlamba kunye nesitovu seenkuni kunye nokufikelela kwigadi yethu epholileyo. Ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala.
Indawo yokuhlala ikwidolophu yaseHvalsø, kufutshane neSkjoldungestien. I-2 km ukuya kumahlathi amahle aseSkjoldnæsholm, i-300 m ukuya kwisikhululo (imizuzu eyi-15 ngololiwe ukuya eRoskilde kunye nemizuzu engama-45 ukuya eCopenhagen Central Station) kunye ne-2 km ukuya eSonnerupgård, ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube netheko apho.
Indlu ihonjiswe kakuhle kwaye isibhakabhaka esikhulu sinika umoya we studio kwigumbi lokuhlala. Apha unokuphumla, ufunde incwadi, udlale umdlalo kunye nabantwana okanye upheke ukutya okulungileyo kunye. Ewe kunjalo, unokufumana ubuthongo obumnandi kwiibhedi ezitofotofo.
IHvalsø yidolophu epholileyo yephondo eneendawo zokutyela ezininzi kunye namathuba amahle okuthenga kufutshane nefulethi. Thatha uhambo ngasechibini lesikolo okanye uhambe uhambo olude kwi-Skjoldungestien. Kulula ukuhamba endleleni kwaye emva koko uthathe uloliwe ubuyela eHvalsø, njengoko indlela inqumla umzila eLejre kwaye iphelela eRoskilde. Ingena kanye ngeentsuku ezimbini ezithandekayo zokuhamba intaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Lise
Sihlala kwindlu enkulu ngokwethu, kwaye ukuba sisekhaya, ngokuqinisekileyo siyafumaneka ukuba sibuze imibuzo kunye nencoko.